मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठको नमूनामय मध्यपुर थिमि – Maitri News
मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठको नमूनामय मध्यपुर थिमि
मध्यपुर थिमि । बिद्यार्थी जीवन देखि नै राजनितिमा संलग्न, कुनै पनि काममा निरन्तर रुपमा लाग्दै जाँदा एक दिन अवश्य नै गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्ने मान्यताका पक्षधर जनप्रेमी, विकासप्रेमी, निडर, अन्याय नसहने, आफूलाई चित्त नबुझ्दासम्म काम गर्ने, कसैको दबाबमा काम नगर्ने, तनाव नलिने, प्रसस्त इच्छाशक्ति भएका , बहुमुखी प्रतिभाका धनी, विकास निर्माणका प्रसस्त काम गरेर अन्र्तराष्ट्रिय अवार्ड समेत पाउन सफल उज्यालो र हसिलो मुहार भएका मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर ईन्जिनियर मदन सुन्दर(जगुलु)श्रेष्ठसंग निशान बुढाथोकीले लिएको अन्तरवार्ताको सारसंक्षेप–
योजना अनुसार कत्तिको काम भएको पाउनु भएको छ ?
हामीले निर्वाचित हुनु अघि घोषणा पत्र जारी गरेर विभिन्न किसिमका प्रतिबद्धताहरु गरेका हुन्छौं । त्यो अनुसार हामीले सर्वसाधरणलाई अनुभूति हुने गरेर परिवर्तनको आभाष हुने गरी धेरै कामहरु गर्न सफल भएका छौं ।
ती कामहरु के के हुन्, जुन सफल भएका छन् ?
अहिले हामीले प्रतिबद्धता गरे अनुसार शिक्षाको कुरा गर्नुपर्दा शिक्षामा पनि नमुना रुपमा नै काम गरिरहेका छौं । सरकारी बिद्यालय र प्राइभेट बिद्यालयलाई समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउने योजना थियो, त्यो अनुसार पनि हामीले कोसिस गरेर काम गरिरहेका छौं । आधारभूत तहको सरकारी र प्राइभेट बिद्यालयलाई एक परिक्षा लिएर निःशुल्क प्रमाणपत्र वितरण गरिरहेका छौं । त्यस्तैे छात्रवृत्ति वितरणमा प्राइभेट बिद्यालयको ५ प्रतिशत स्वामित्व ग्रहण गरेर परिक्षा नै संचालन गरी छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छौं । यसलाई पनि नमुनाको रुपमा लिन सकिन्छ । मध्यपुर म्हसिका भनेर स्थानिय पाठ्यक्रम लागु ग¥यौं । अहिलेको अवस्थामा शिक्षामा मध्यपुर स्वर्णकाल भन्दा फरक नपर्ला । त्यस्तै स्वास्थ्यको पनि कुरा गर्दा मध्यपुर थिमि स्वास्थ्यमा अग्रणि स्थान तथा नमुनाको रुपमा अगाडि छ । नेपाल कोरिया मैत्री नगरअस्पताल यही मध्यपुर थिमिमा अवस्थित छ । यस अस्पतालले कोभिड १९ को महामारीकोमा विशेष सेवा प्रदान गर्ने कार्य भएको थियो । त्यसको अलावा दैनिक ७ सय भन्दा माथि विरामीहरुको लागि सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । अक्सिजन प्लान्ट आफै निर्माण गरेको अवस्था छ भने आफ्नै पि सि आर ल्याब संचालनमा छ । १५ वटा भेन्टिलेटरबाट कोभिड विरामीको उपचार भइरहेको अवस्था छ । त्यति मात्र नभई आफ्नै कोभिड एम्बुलेन्स र नन कोभिड एम्बुलेन्स संचालनमा छ । एम आर आई, सिटि स्क्यान संचालनको लागि पूर्वाधारको लागि २० करोड लगानी गदैछौं । नगरपाललिकाले संचालन गरेको अस्पताल नमुनाकै रुपमा संचालन भइरहेको छ । सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सन्दर्भमा मध्यपुर थिमि नगरपाकिला नेपालमै नमुना बनेको छ । सम्पदाहरुको पुनःनिर्माण देखिने गरी नै हामीले विकास निर्माणका कामहरु गर्दै आर्दै आइरहेका छौं। यस मध्यपुर थिमिमा २५ वटा पोखरीहरु रहेकोमा १५ वटा पुनः निर्माण भैसकेको छ । अहिले अन्तिम रुपमा निर्माण भएको बोडेको कमलपोखरी, जहाँ भूमाफियाहरुले कित्ताकात गरेर आवादी गरेको ठाउँमा हामीले मुद्दा लडेर जितेका छौं र त्यही ठाउँमा पोखरी बनाएका छौं। मन्दिरहरु निर्माणमा साना ठूला गरी २३ वटा मन्दिर पुःननिर्माण गरेका छौं । ३७ वटा पार्टी पुनःनिर्माण गर्नुका साथै २५ वटा ढुङगेधारा निर्माण, ५ वटा विहार, ३ वटा परम्परागत दरबार निर्माण, सबै गल्लीहरुमा ढुङगा छाप्ने कार्य गरेका छौं । १३ वटा पार्कहरु पुनःनिर्माण गरी फोहोरका डङगुर थुप्रिने ठाउँमा पार्क निर्माण भइसकेका छन् । छोटो समयमा धेरै कामहरु गरेको कारण नेपालमा एउटै मात्र नगरपालिका यो मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले सन् २०२० मा एसियन टाउनस्केप अवार्ड समेत पाइसकेको छ । यी सबै कामको मूल्यांकन गरी यूएन हेबिट्याट जुन संयुक्त राष्ट्र संघको शहरी क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाबाट प्राप्त गरेका छौं। त्यसैगरी खेलकुदको क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आइरहेका छौं । देशभरमा मेयर कपको प्रतियोगिता हुने भनेको मध्यपुर थिमि नै हो । जिम्याष्ट्रिक प्रतियोगिता, बुद्धिचाल, फुटवल,फुटशल, ब्याडमिन्टन,कराँते आदि धेरै प्रतियोगिता हुन्छ ,धेरै विधाको प्रतियोगिता गर्दैछौं । मध्यपुर कराँते एकाडेमी हामी आफैले संचालन गरिरहेका छौं भने ३ वटा खेल मैदान निर्माण भइरहेका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा पनि हामीले मध्यपुरको ८ मिटर सम्मको बाटो कालोपत्रे भइसकेको छ। यही नगरपालिका नजिकको बाटो निर्माण हुन बाँकी छ। विवादको कारण रोकिएको हो, यो पनि तुरुन्तै निर्माण हुन्छ । सम्पदाको लागि ३७ करोड रुपैया खर्च भएको छ भने कालोपत्रे र ढल व्यवस्थापनको लागि ६० करोड रुपैया यो ४ वर्षको अवधिमा खर्च भइसकेको छ । यसरी सबै विधा समेट्ने गरी विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न भएका छन्। त्यसो त अपाङगता भएकाहरुका लागि पनि नमुनाको रुपमा काम गर्दै आएका छौं । अहिले मानव बिद्या गृह भन्ने छ जहाँ तीन तहका अपाङगता भएका मानिसहरुको लागि छुट्टा छुट्टै बिद्यालय संचालन गर्दै आएका छौं । त्यसै गरी श्रवण शक्ति नभएकाहरुका लागि हामीले रोजगारको व्यवस्था गरेका छौं । जुन नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा श्रवण शक्ति नभएका ४ जना काम गर्दै आइरहनुभएका छ । यसरी सबै क्षेत्रमा हामीले काम गर्दै आइरहेका छौं ।
महिलाको क्षेत्रमा पनि हामीले काम गर्दै आइरहेका छौं । महिलाहरुको लागि धेरै तालिमहरु दिदै आएका छौं । महिला दिदि बहिनीहरुले तालिम धेरै भयो प्रमाण पत्रहरु चाङ धेरै भयो भनेपछि हामीले अलि फरक ढंगबाट काम गरेका छौं । डल्ला साबुन बनाउने, स्विटर बनाउने, डल बनाउने , सिलाइबुनाइ, ब्यूटिपार्लर ,बेकरी, जस्ता धेरै तालिमहरु संचालन भएका छन् । तालिम मात्र होइन अब आय आर्जनका काम पनि गर्नु पर्छ भनेर हामी अगाडि बढीरहेका छौं । अहिले बढ्दो शहरी करणले गर्दा यो मध्यपुर थिमिमा घरहरु धेरै निर्माण भएका कारण कौसी खेतीलाई पनि जोड दिएका छौं । लगभग १०० जना भन्दा बढीले कौसी खेतको तालिम लिसकनुभएको छ भने अर्को समुह पनि तयारी अवस्थामा छ तालिमको लागि । तालिम मात्र दिने होइन यसबाट आय आर्जनको लागि प्रोत्साहन पनि गर्दै आएका छौं । यसमा चाँहि हरेक समुहका महिलाहरु पर्नु हुन्छ । सिपमुलक तालिम जस्तै अटोमोबाइल्स्का तालिमहरु , काष्ठकलाका मूर्ति बनाउने तालिमहरु , परम्परागत पर्खाल निर्माण तथा गारो लगाउने तालिहरु प्नि महिलाहरुका लागि संचालन गर्दै आएका छौं ।
यस क्षेत्रमा विभिन्न जात जाति भाषा भाषिहरुको बसोबास रहेको छ , स्थानिय सर्वसाधारणको साथ र सहयोग कत्तिको पाउनु भएकोछ ?
स्थानिय सर्वसाधाारणको साथ र सहयोग विना त हामी विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न गर्न सक्दैनौं । हामी जुनसुकै काम पनि उपभोक्ता समिति मार्फत जान्छौं । उपभोक्ता समिति भन्ने बित्तिकै उहाँहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने नै भयो । जति पनि सम्पदाको कामहरु भए, ती सबै जनसहभागिताबाट सम्पन्न भएको छ । जब उहाँहरुको प्रत्यक्ष जनभागिता हुन्छ । त्यसमा अपनत्व बढी हुन्छ ।
स्थानिय तह धेरै वर्ष जनप्रतिनिधि विहिन बनेको अवस्थामा निर्वाचित भइसकेपछि कस्ता खालका समस्याहरु लिएका आउनु भयो?
धेरै वर्ष स्थानिय निकाय जन प्रतिनिधि विहिन भएको अवस्थामा जब निवाृचित भएर हामी आयौं, त्यति खेर सामान्य समस्याहरु पनि पेन्डिङ अवस्थामा थिए । जनप्रतिनिधि आएर गरिहाल्छन् नि भन्ने थियो । चाङ धेरै थियो । बजेट बनाएपनि कामहरु भएका थिएनन् । नितिगत रुपमा हिम्मतका साथ गर्नुपर्ने निर्णयहरु प्नि भएका थिएनन्, जुन हामी आएपछि सम्पन्न भएका छन् । अर्कोतिर १० हजारजति घरधुरीका नक्सा पास गर्ने काम रोकिएको थियो । म आफैपनि प्राविधिक भएको कारण आफै जिम्मा लिएर नक्सा पास गर्ने काम गरे । नितिगत रुपमा लगभग ४ हजार देखि ४५ सय वटा नक्साहरु पास भइसकेको छ । विकास निर्माणका कामहरु बजेट परिचालन गरेर अहिले अनुभूति हुने गरी देखिने गरी नै भएका छन् । राजनिति सेवा हो कहिले पनि पेशा रुपमा लिनु हुँदैन , विना स्वार्थ काम गरेमा हरेक काममा सफलता पाउन सकिन्छ ।
धेरै कामहरु त भइसकेका छन् , केही योजनाहरु धेरै बाँकी छन् ।अहिले जति पनि कामहरु हामीले गर्दै आइरहेका छौं , ती कामहरु यही समय हुँदैमा सम्पन्न गर्ने योजना छन् । अझ पनि विकासका योजनाहरु धेरै छन् । उपत्यकाप्राधिकरण बाट ल्याएर जग्गा एकिकरणका काम बल्ल १÷२ वटा मात्र आयोजना संचालन गर्दै छौं । व्यवस्थित शहरीकरणको लागि ६ वटा आयोजनाहरु बाँकी छन् । नगरपालिकाले आफ्नै पहलमा रिङरोड बनाउने योजना छ । आगामी दिनमा नविकृत गरी फेरि जनताको माझमा गई नगर प्रमुखको रुपमा फेरि पनि काम गरी बाँकी रहेका सम्पूर्ण कामहरु गर्ने सम्पन्न गर्ने योजना छ ।
(नामी साप्ताहिकवाट साभार )
Previous Previous post: चीन र ताइवानबीच पुनः एकीकरण हुन्छ : राष्ट्रपति सी
Next Next post: आज कुष्माण्डा देवीको पूजा गरिँदै